Nosin'ny Paska - Wikipedia
Ny Nosin'ny Paska na Nosin'ny Paka dia nosy manirery ao atsimo andrefan'ny Ranomasimbe Pasifika, fantatra manokana amin'ny sarivongany ngeza be (ny moai) sy ny fanoratana ôseanianina, ny rôngôrôngô. Atao amin'ny fiteny espaniola hoe Isla de Pascua izy, ary amin'ny fiteny rapa noy hoe Rapa Nui midika hoe "Rapa Be", satria misy ilay atao hoe "Rapa Kely".
Io nosy io dia any amin'ny 3 700 km miala ny morontsiraka silianina ary 4 000 km miala an'i Tahity. Ny nosy akaiky indrindra azy dia ny nosy Pircairn izay 2 000 km any andrefana. Ny endrik'ilay nosy dia telo zoro, manana halava mirefy 23 km fara faha-beny, ny velarantaniny dia 162 km². Ny isan'ny mponina dia 3 304 tamin'ny tana 2002. Ny renivohiny dia i Hanga Roa.
Ny Eorôpeanina nahita ny nosin'i Paska voalohany dia ilay mpitondra sambo Jakob Roggeveen, tamin'ny andro Paska (na Paka) tamin'ny 5 Aprily 1722, ary niisa 4 000 NY mponin'ilay nosy tamin'izany fotoana izany. Lasan'i Espaina ilay nosy tamin'ny 1770 ary lasa fananana silianina tamin'ny 1888.
Hatry ny 1995, nosoratan'ny UNESCO ao amin'ny fananan'ny Olombelona ny haren-tsain'ny Nosin'i Paska. Ny valan-javaboahary, tsindraindray iambesana, manodidina ny dindona.
Izy no nosy any andrefana indrindra amin'ny Ranomasimbe Pasifika, izay malaza amin'ny dindona megalitika navelan'ny Rapanoy (haifomba paskoana voalohany): ny "moai"; sarivongan'olona miisa sivinjato manerana ny nosy, vita amin'ny vato bazalta, manana halava 4 m eo ho eo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nosin%27ny_Paska&oldid=995105"
Voaova farany tamin'ny 27 Jolay 2020 amin'ny 12:02 ity pejy ity.